Landa i-USS Nimitz ne-USS Eisenhower V2 FSX & P3D - Rikoooo
Usayizi 22.5 MB
Play 160 730
Umbhali: Javier Fernandez, Sylvain Parouty, uguqulwe nguRikoooo
Kuvuselelwe ku-29 / 08 / 2017: Manje i-100% iyahambisana ne Prepar3D i-v1, v2, v3 ne v4 + FSX, FSX-Steam Edition. Isifaki esithuthukisiwe esizenzakalelayo, inguqulo entsha ye-AICarriers 2 (.NET) ehambisana nawo wonke ama-simulators ashiwo ngenhla.
Kuvuselelwa ku-6 / 17 / 2014: Ukufakwa okuthuthukile okuzenzakalelayo, ukuhambisana Prepar3D i-v1 ne-v2 +
Nasi izimoto zezindiza ze-USS Nimitz & USS Eisenhower ezindizeni ze-US. Lena yengezo okuthiwa i-AI (Intelligence Intelligence) elawulwa ikhompyutha.
Lokhu okungeziwe ngekhwalithi ephakeme kuzokuvumela ukuba ufike kuma-carrier amabili ezindiza ngokugcwele ngokuzenzekela ngaphakathi kwe-3D yangaphandle / yangaphandle nokulungiselelwa okumbalwa. Ibuye itholakale ne-heliport kanye ne-catapult ye-takeoffs.
IZINGUQUKO kule nguqulo:
-New "Umthamo wemvula Ziyaqhubeka" ukucupha for Nimitz kanye Eisenhower. Ideal for VERTREP imisebenzi nge helos.
imodeli -New izimoto oiler USNS Patuxent T-AO 201. Izici landable helipad nobusuku umbani. Isebenza ngokuzimela njengenhlangano umkhumbi AI elingase uhamba yedwa (i ukumisa eyengeziwe for AIcarriers nalo enikeziwe):
-Added Umusi imiphumela bonke izihlilingi (bheka kangcono umkhumbi in ukunyakaza)
umsindo -Added for catapult kwethulwa futhi jet blast deflectors
-Fixed Inkinga yabangela indiza womdlali ukuze bawe phansi emanzini ngenkathi bengena emphemeni lendlu yebhanoyi kusuka #3 ikheshi.
-Fixed Nezindaba ebusuku imibane abanye zezindiza "port ukuvakashelwa" ukucupha
-Corrected Ezinye ukungalungi in the aft radar umbhoshongo futhi kulesi siqhingi.
-Added Animated catapult "Bhalobhasha"
-Additional Catapult crew for namakati #3 kanye #4.
ukuthungwa -New for catapult shuttles.
New isifaki okuzenzakalelayo, elungisa nezinkinga ukufakwa of AICarriers 2. Manje iyahambisana zonke izinguqulo Windows.
Kuyavumelana FSX I-SP2, FSX Ukushesha, FSX I-Steam Edition kanye Prepar3D i-v1 v2, v3, v4
Uzokwazi ukungena kulaba baphathi bezindiza ezimbili, ngikweluleka ukuthi usebenzise i-T-45 Goshawk ne-F-14 Tomcat FSX nguDino Cattaneo. bheka http://indiafoxtecho.blogspot.com/
Afakwe option: AIcarriers2 wuhlelo encane evumela ukuthi wena ukubeka umkhumbi wakho AI ibanga achazwe phambi kwakho ukuze ungakwazi kulo.
I-USS Nimitz (CVN-68) ndiza othwala kuyisipho enemisebenzi American yenuzi-sikagesi. Ingenye 11 izindiza giant abathwali Navy futhi okwamanje omunye yempi enamandla kunazo zonke emhlabeni. Lo mkhumbi waqanjwa igama elithi Nimitz, behlonipha Admiral Chester Nimitz, owayala Pacific Fleet phakathi neMpi Yezwe II. Isiqubulo Umkhumbi sithi "Ukubambisana, isiko". Umthombo Wikipedia
I-USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69), owayaziwa Ike, kwaba enemisebenzi ndiza othwala US yenuzi-powered, ingxenye yesigaba Nimitz. Lokhu ngokwesibili ndiza othwala Nimitz subclass, futhi ingenye 11 izindiza giant abathwali Navy. Watshelwa ukuba esikhundleni USS Franklin D. Roosevelt, owayengumfundisi we izindiza othwala kusukela Second iMpi Yezwe. Ekuqaleni, umkhumbi waze ogama lakhe behlonipha Eisenhower 34th uMengameli wase-United States, Dwight David Eisenhower. Nokho, igama lakhe ladluliselwa igama eliphelele Dwight D. Eisenhower May 25, 1970. Isiqubulo womkhumbi "I Like Ike." Kusukela aba service, Ike uye kwadingeka 13 ezahlukene Umkhuzi wamasosha. Source Wikipedia